Magaalada Paris oo sugeysa Neymar – Gool FM
Magaalada Paris oo sugeysa Neymar
Kaafi August 3, 2017
(Paris) 03 Luulyo 2017. Kaddib toddobaadyo warar iyo xan la’isla dhex qaadayey ee ku saabsanaa aayaha Neymar, waqti badan hadda kama harsana in uu ugu dambeyn u saxiixo Paris Saint – Germain.
Laacibkii hore ee Barca iyo Paris Saint –Germain Maxwell Scherre hadana ah isku duwaha ciyaaraha kooxda ka dhisan caasimadda France waxa uu ku sugnaa goobkii uu tijaabada caafimaad ku marayey Neymar sida ay shaacisay L’Equipe, sidoo kale waxaa xaadir ahaa diktoorka iyo agaasimaha PSG Eric Rolland oo joogay Porto.
PSG waxaa la filayaa in ay saacadaha soo socda bixiso lacagta lagu bur burinayo qandaraaska xiddigga iyada oo ay kooxdu ku dhawaaqi doonto saxiixiisa maaalinta berry ah oo ay qabaneyso shir jaraa’id, sidaas waxaa laga soo xiganayaa L’Equipe.
Neymar ma ciyaari doono kulankiisa ugu horreeya bilowga toddobadka dambe oo ay PSG la dheeli doonto Amiens balse tarbuunka ayuu ka daawan doonaa.
AC MILAN VS CRAIOVA: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!